Abenzi zeplastiki bebakala leplastiki kunye nefektri - China abavelisi beeplastiki zebakala leplastiki
I-HUAJING imveliso yemicrosoft eyenziweyo yamkela umgaqo wokunyibilika kwe-crystallization kubushushu obuphezulu. Ngokwendlela yemichiza yendalo yokwakheka kunye nolwakhiwo lwangaphakathi, oluveliswe emva kobushushu be-electrolysis kunye nokunyibilika kubushushu obuphezulu, ukupholisa kunye ne-crystallization, emva koko i-mica yokwenziwa inokufunyanwa. Le mveliso inezibonelelo zokucoceka okuphezulu kobumhlophe kunye nokungaxutywanga, umxholo we-iron ophantsi kakhulu, akukho zimbi zinzima, ukumelana nobushushu, i-asidi enganyangekiyo, kwaye ikwanyamezela ukubola kwegesi enobungozi, ukusebenza okuzinzileyo kunye nokugquma okuhle.
I-Huajing yeplastiki ekumgangatho we-mica powder, esetyenziselwa ubukhulu becala iiplastikhi zobunjineli ukwandisa imodyuli yokugoba kunye nokuguquguquka; Kwindawo yeplastikhi yezincedisi zeemveliso ze-elektroniki, emva kokongeza imicah, zinokucokiswa ngokudibeneyo kunye noyilo.
Umhlaba owomileyo we-mica powder ye-Huajing uyakhuphisana kwixabiso kwaye uzinzile kumgangatho. Ubumsulwa obuphezulu be-mica powder eveliswa ngokusila ngaphandle kokutshintsha nayiphi na ipropathi yendalo. Ngexesha lokuveliswa kwemveliso yonke, samkela inkqubo egcwalisiweyo yokugcwalisa ukuze kuqinisekiswe umgangatho wemveliso;